Corset PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ – အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / ထိပ် / Corset PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင် 4-18, အတူအပြည့်အဝစီတန်း corset ဖြစ်စေခြင်းငှါအပြည့်အဝအရောင်သင်ခန်းစာအတိုင်းလိုက်နာ 12 သွေ့ခြောက်သောအရိုး.
SKU: 676 categories: Lingerie, ထိပ်, အမြိုးသမီးမြား Tags:: သတို့သမီး, ဆောင်သတို့သမီး, corset, ဖဲ, မင်္ဂလာဆောင်, အမြိုးသမီးမြား
5မီတာ x ကို 4cm strips တွေဘက်လိုက်မှုဖြတ်ထည်
1.1မီတာ petersham တိပ်
သင့်ရဲ့အမိန့်ပြီးပြည့်စုံသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်တစ်ဦး .zip ဖိုင်အဖြစ်သင့်ရဲ့ PDF ကိုအပ်ချုပ်ပုံစံကို download လုပ်နိုင်မည်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာစကေးရန်သင့်ပုံစံ print ထုတ်ဖို့ Adobe Reader အားလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဒီကဒီမှာအွန်လိုင်းကို download လုပ်ပါမှအခမဲ့နှင့်ရရှိနိုင်: https://get.adobe.com/reader/. ပုံနှိပ်ညွှန်ကြားချက်အသီးအသီးကို download အတူပါဝင်ကြသည်
Copyshop အရွယ်အစား: 50စင်တီမီတာက x 110cm
A4 စာမကျြနှာ: 12
အမေရိကန် LETTER: 15
သုံးသပ်ချက်ကိုရေးပေးပါ။Corset PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ” ပြန်ကြားချက်ကိုပယ်ဖျက်